Martida Makrafoonka, 01 January 2014
Martida Makrafoonka iyo Faarax Macalin
Barnaamijka Martida Makrafoonka waxaa maanta marti ku ah Faarax Macalin, guddoomiye-ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo ka warramaya 50 guurrada madaxbannaanida Kenya iyo waxa 50-kaasi sanno u hirgalay.
Martida: Guddoomiyaha Bangiga Dhexe
Barnaamijka Martida Mikrofoonka toddobaadkan waxa marti ku ah Bashiir Ciise Cali oo ah guddoomiyaha cusub ee KMG ah ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. Bashiir wuxuu ka hadlayaa shaqada bangiga iyo musuqmaasuqa Soomaaliya.
Martida: Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo ayaa marti ku ah barmaamijka Martida ee toddobaadkan. Guddoomiyaha ayaa ka hadlaya xaaladda amniga gobolka iyo waliba muranka ka taagan doorashooyinka golleyaasha deegaanka gobolka Hiiraan.
Martida iyo Prof. Afyare Cabdi Cilmi
Prof. Afyare Cabdi Cilmi oo macalin ka ah jaamacadda Qadar ayaa marti ku ah barnaamijka Martida Makrafoonka ee Toddobaadkan. Prof. Afyare wuxuu ka hadlayaa muranka u dhaxeeya Madaxweyne Xasan iyo Ra'iisul-wasaare Saacid.
Martida: Mudane Yuusuf Cabdi Cabdulle
Barnaamijka Martida ee toddobaadkan waxa marti noogu ah Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe, Yuusuf Cabdi Cabdulle oo ka warbixinaya roobabka iyo dagaalada gobolkaas ka jira
Martida Makrafoonka: Ambassador Maxamed Cali America
Barnaamijka Martida Makroofanka waxa uu todobaadkan ku saabsanyahay xaaladda Soomaalida Kenya ku nool iyo qorshaha dib u celinta qaxootiga Soomaalida, waxaana marti ku ah Safiirka Somalia u fadhiga dalka Kenya Maxamed Cali America.
Barnaamijka Martida Makrafoonka iyo C/Qaadir X.Maxamuud Dhaqane
Barnaamijka Martida Makrafoonka waxaa todobaadkan marti u ah C/Qaadir X.Maxamuud Dhaqane oo siyaasi xilal kala duwan ka qabtay Somalia, waxaanu faaqidayaa khatarta al shabab
Martida Mikrofanka: Cabdullahi Calas Jimcale
Biyaha badda oo kacsan ayaa sababay inay adkaato in la helo Tahriibayaal badan oo afrikaan ah oo ay dooni kula degtay agagaarka jasiiradda Lampadusa ee dalka Talyaaniga.
Martida Mikrofanka: Cabdiraxman Mukhtar
Barnamijka Wicitaanka Wuxuu ku saabsanyahay dhalinyardii Somalia Mareykanka ee aaday Somalia, waxaana ka wareysaneynaa Cabdiraxman Mukhtar oo qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ay xiriir lahaayeen
Martida:Xoghaye Cabdi Qani Saciid Carab
Barnaamijka Martida waxaan toddobaadkan ku soo qaadaneynaa xog wareysi aan arimaha Cayaaraha iyo doorka Somalia kala yeelanayay Xoghayaha Guud ee Xiriirka Somaliyeed ee Kubadda Cagta, Cabdi Qani Saciid Carab.